Feo avy ao Zimbaboe miampy firenena 3 hafa (2005) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2019 4:22 GMT
The Bearded Man miresaka momba ny ady anaty an'ny MDC,
Eddie Cross, mpanolo-tsaina ara-politika ambony an'i Morgan Tsvangirai, filohan'ny MDC, mizara ny sasany amin'ny fomba fijeriny mikasika ny olana ho an'ireo mpamaky ao amin'ny zimpundit.
Mpanoratra malaza Chenjerai Hove mampiasa fampitahana aretina mba hanazava ny zava-mitranga ao amin'ny MDC.
Malawi:-Geeta miresaka ny esoeso momba ny orana voalohani amin”ny vanim-potoana raha mandrahona ny fiainana ho mafy kokoa kosa ny hanoanana ao amin'ny firenena.
Rwanda:- George Conard manoratra momba ireo finday marobe izay tokony hanova ny fiainana ao amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana satria miha-maro ireo olona mampiasa finday ho “sehetra iray fa tsy fampiharana fotsiny.” Efa mampiasa “fahana” finday ny ao Rwanda ho solon'ny vola.
Burundi:- RW mamakafaka ny fahaverezan'ain'ireo olon-tsotra teo am-pelatanan'ny tafi-pirenena Agathon Rwasa ho an'ny fanafahana (FNL amin'ny teny Anglisy) nandritra ny volana Septambra. Ity ny lisitra hafa momba ireo habibiana.
Mbola maro no hoavy avy amin'i ZimPundit amin'ny herinandro manaraka!